Ngwongwo Ngwongwo eji eme ihe na-eme ka ihe na-eme ka mmiri ghara ikpuchi-HLQ
Home / ngwa / Brazing imebi / Steelgbọ mmiri Nchara Na-atụgharị Anya
Ngwongwo ígwè eji eme ihe
Category: Brazing imebi Tags: brazing ígwè tankị na itinye n'ọkwa, braking tankị, zụta igwe tankị igwe, gas tankị na-etinye brazing, HF tankị na-agba ume, ntinye brasi ígwè tankị, ntinye brasi tankị, Ngwunye tankị na-ekpo ọkụ, tankị na-emepụta mmanụ brazing, ígwè tankị, ígwè tankị na-ekpo ọkụ ihe ọkụkụ
Tankị Trọl Brazing Na-Ejiri Igwe Ọkụ
Ebumnuche nke ngwa a bụ induction braze cylindrical steel tankị maka &lọ Ọrụ Mmanụ na Gas. Onye ahịa, onye na-emepụta tankị ụgbọ mmiri, chọrọ iji ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ iji meziwanye usoro mmepụta ihe ma bulie arụmọrụ ike site na dochie kpo oku ọkụ ọkụ.
DW-HF-45 kW induction usoro oku eji na ngwa a.
A na-etinye tankị nchara ahụ n'ime omenala induction kpo oku. Ejiri ike 40 kW chọọ brazing achọrọ ka ọ dị na 15 sekọnd rute okpomọkụ nke 800 Celsius (1472 ° F).
Lọ ọrụ: Oillọ ọrụ mmanụ na gas, pipeline, arịa, tankị, mmiri ọkụ ma ọ bụ ọrụ ọla ndị ọzọ
brazing ndị na-eme atụmatụ nkwado
Ngwunye Brazing igwe anaghị agba agba Iji brass